XOG: Maxaa ka socda magaalada Kismaayo, muxuuse Ra’iisul Wasaare Rooble kala kulmay dekedda.
July 7, 2021 Xuseen 0
Puntlandtimes (Kismaayo)-Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa ku sugan magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland.
Ra’iisul Wasaare Rooble oo maanta siweyn loogu soo dhoweeyey magaalada Kismaayo ayaa kulamo laleh madaxda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada magaalada Kismaayo.
Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo socdaalka Rooble ayaa sheegaya in isaga iyo madaxda Jubbaland ka arrinsanayaan wadashaqaynta labada dhinac, arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo xal ka gaarista khilaafka siyaasadeed ee gobolka Gedo.
Ra’iisul Wasaare Rooble, waxaa kale oo uu galabta booqday dekedda magaalada Kismaayo si uu ugu kuurgalo xaaladdda dekedda iyo shaqooyinka kala duwan ee ka socda, wuxuuna sheegay inay kaalin ka qaadan doonaan horumarinteeda maadaama burbur xooggani ka muuqdo.